Internet yezvinhu (IoT) Isu takangofungidzira zvipfuwo zvedu zvichitaura nesu asi wakambofungidzira imba yako ichitaura newe kana motokari yako, gonhi richitaura kune magetsi emagetsi! The Internet akaita kuti izvi zvikwanisike kubatanidza zvinenge zvese zviripo zvakatipoteredza. Firiji, muchina wokuwachisa, microwave uye kunyange mapoto, iye zvino hapana chisina kubatwa nenyika yedhijitari.
Takangofungidzira kuti mhuka dzedu dzinovaraidza dzichitaura nesu asi wakambofungidzira imba yako ichitaura newe kana motokari yako, mukova uchitaura nemagetsi emagetsi! The Internet akaita kuti izvi zvikwanisike kubatanidza zvinenge zvese zviripo zvakatipoteredza. Firiji, muchina wokuwachisa, microwave uye kunyange mapoto ako, iye zvino hapana chisina kubatwa nenyika yedhijitari. Zvinhu zvemazuva ese zvine yavo IP kero zvichakurumidza kuitika. Kukurukurirana kwezvinhu uku kwazova chiono chazvino chemichina ichiti inovandudza hupenyu hwedu. Asi, isu tiri pamatanho ekutanga eIoT. IoT ichavhura mitsva yemari yemari, mabhizinesi modhi, uye ruzivo mune tekinoroji. Pazviyero zvakakura zvingave zvinobatsira kune vese vashandisi vepachivande vachivapa hupenyu hwepamusoro, nyaradzo, chengetedzo uye kune kambani zvaizobatsira mukudzikisa mutengo, kuwana hunyanzvi uye kutonga kuri nani pamabhizinesi avo. IoT ichaunza mafungu ezvikamu zvitsva kumisika. Mafomu matsva ekubatanidza isina waya uye mapuroteni, mhando nyowani dzebhizinesi dzine mutengo wakadzikiswa wevaridzi, uye isina kunetseka UI/UX kutaura zvishoma. Tekinoroji dzakasiyana seWi-Max, Bluetooth, Wifi, Yakaderera Simba Wi-Fi, LTE, yakajairwa Ethernet uye yazvino Li-Fi, yave kutoshandiswa kubatanidza zvikamu zvakasiyana zveIoT kuma sensors asi gore rino raizoona Sigfox, LoRaWAN. uye 3GPP's narrowband (NB) iri kuedzwa. Makambani, kune rumwe rutivi, aizowana mabhenefiti makuru neIoT. Basa rekure, kuteedzera kutarisisa, uye manejimendi, kushanda nesimba uye kugadzira, kumhanya uye kuwanikwa, inzvimbo shoma uko tekinoroji yaizoshanda zvinoshamisa.
Kunze kweIoT kushandiswa dzimba dzakangwara, akangwara chibatiso hurongwa kana midziyo yesimba inopa nyaradzo uye kugara zvakanaka kwemunhu, yafambira mberi pakuita kuti maguta ave nehungwaru. Nechinangwa chekubatanidza hungwaru uye ruzivo nemidziyo, makambani akasiyana ari kushanda kumisa network yemidziyo yakabatana. Kusanganiswa kwe analytics, data hombe, uye kubatanidza kwese kwese kuri kuunza hukuru hutsva hunogona kuita sekudzora nekugadzirisa midziyo, kugona kutarisa kure uye kuvaka ruzivo kubva mukuwanda kwedata. Nekudaro IoT irikushingairira kushandura zvivakwa zvemaguta zvachose nekudzikisa kutsvikinyidzana kwemigwagwa, kusimudzira zvifambiso zvevoruzhinji, kugadzira masevhisi ekanzuru anoshanda uye anodhura uye kuchengetedza vanhu vakabatikana uye vakachengeteka. IoT iri kubatanidza huwandu hwemidziyo yakangwara zuva rega rega uye mumakore anotevera, tinenge takakomberedzwa neanosvika 24 bhiriyoni. IoT zvishandiso. Zvino ndiwo mamwe makuru nhau! Kunze kwaizvozvo dzimba dzakangwara, smart magetsi-ekuchengetedza masystem, akangwara zvishandiso zvakare anobatsira vanhu kuteedzera yavo yega hutano neyakavandudzwa uye izere mishonga mhedzisiro. Dzakabatana mota dzinobatana neiyo infra yemaguta akangwara kuchinjisa nzira dzakajairika idzo dzakatevedzwa nevatyairi pakutanga. Asi nezvakanaka izvi zvinouyawo nenjodzi.
Ruvimbo rweveruzhinji - Muna 2015, Control State yeiyo Smart Home yakaona kuti vanhu vaishushikana zvakanyanya neruzivo rwavo kubiwa kubva dzimba dzakangwara. Ichi chingave chimwe chikonzero chikuru nei vatengi vasingachinjike kuIOT zviri nyore. The Internet YeZvinhu ndiyo inotevera nhanho ye kushandisa michina uye kubuda kwehunyanzvi hutsva huchavandudza zvinhu zvakawanda zvehupenyu hwedu kungave kubasa kana kumba. Gore rino raizoona IoT ichikura kuita maindasitiri emadhora akawanda indasitiri chete kana kuchengetedzeka uye kunetseka kwehukama kuchitariswa.